Dilkii la daboolay ee Benazir Bhutto - BBC News Somali
Image caption Benazir Bhutto oo ku sugan isu soo bixii lagu dilay
Benazir Bhutto waxa ay ahayd gabadha uu dhalay Zulfikar Cali Bhutto, ra'isulwasaarihii ugu horeeyay ee si dimoqoraadi ah loo doortay dalka Pakistaan, kaas oo xukun dil daldalaad ah ku fuliyeen militariga af gambiga kula wareegay Pakistan ee madaxweyne Jeneraal Siya Ul Xaq.
Nin xertiisii ku laayey Pakistan
Labo jeer ayay Ra'isulwasaare ka noqotay Pakistan Bhutto, balse markasta waxaa xilka ka qaadi jiray militariga oo aanan iyada ku kalsoonayn.
"Musharaf waxa uu si qaldan uga faa'iiday xaaladda oo dhan, si ula kac ah ayuu u mijo xaabiyay amniga Bhutto, taas oo saamaxday in si sahlan loo dilo" ayuu yiri Bilawal.
Tusaale ahaan sheeyga hiddo-sidaha ah (DNA) oo laga qaaday hilbihii Bilaal ee go'goay ee laga uruuriyay meeshii qaraxa ka dhacay, kadibna lagu baaray sheeybaar ku yaala Maraykanka ayaa waxa ay is yeesheen hiddo-sidayaashii laga heley dharkii iyo shukumaankii uu isticmaalay Bilaal ee laga heley guriga Hasnain Guul oo ahaa ninka hoyga siiyay habeenkii ka horeeyay maalintii uu dilka fulin rabay.
Image caption Benazir Bhutto oo ku sugan isu soo bax olole siyaasadeed oo ka dhacayay magaalada Mirpur Khas, Pakistan, 18 December 2007
Waxa ay ahayd shaqsiyad haraysay saaxadda siyaasadda Pakistan muddo dheer, labo jeer ayay Ra'isulwasaare noqotay, waxayna kala ahaayeen 1988 illaa 1990-kii, iyo markale oo ahayd intii u dhaxaysay 1993-dii illaa 1996-dii.
Waxa ay ahayd gabadh da' yar oo jalaqsan, quruxna badan, taas oo isu soo muujisay in ay tahay qofka ay dadka ku badalan karaan siyaasadda ay raggu horboodayaan.
Dalka Pakistan waa wax iska caadi ah in aad maqasho dadka oo ka hadlaya in ninkeeda Asif Zardari uu ka dambeeyay dilka Bhutto, waxaana taas lagu saleeyay xaqiiqda ah in uu isaga noqday qofka ugu badan ee ka faa'iiday dilkeeda.
Image caption Azif Zardari sayaa beeniyay in uu lug ku lahaa dilka xaaskiisa Benazir Bhutto
"Waxaa jiray dad badan oo dowladda ka tirsan oo aan rabnay in aan waraysano, balse waa ay diideen" ayuu yiri Heraldo Munoz oo madax ka ahaa guddiga Qaramada Midoobay ee baaritaanka dilka Bhutto. Waxa uu intaas ku daray in xitaa gurigii ay joogeen guddiga ay dowladda ka qaaday illaaladii waardiyaha ka hayay.
Sargaal sare oo ka tirsan dowladdii Zardari ayaa arrintan ku micneeyay in uu ahaa 'iska hor imaad', taas oo ah ereybixin ay dowladda u isticmaasho marka ay dhacaan dilalka aanan caddaalada loo marin.
Lahaanshaha sawirka FAROOQ NAEEM
Image caption Dacwad oogihii gaarka ahaa Chaudhry Zulfiqar Ali ayaa la dilay isna
Image caption Dad badan ayaa ka muraaro dilaacay dilka Bhutto
Rag soo xirtay xijaabyo oo weerar ku qaaday kuleej ku yaalla Pakistan
2 Abriil 2017